Hunhu uye kuchengetwa kwevatema veGerman Mufudzi | Imbwa Nyika
Hunhu uye kuchengetwa kweiye mutema wechiGerman Mufudzi
El mutema german mufudzi Iyo ine chete misiyano mishoma kana ichienzaniswa neiyo yatingati imbwa yakajairika yechiGerman uye pane dzakawanda nguva inogona kuvhiringidzwa neimwe mhando yemusanganiswa pakati pemarudzi kana zvakare seimwe mhando yakasiyana zvachose.
Iyo nhema nhema yekuGerman imbwa yemakwai sekuzivikanwa kwake, inotaridzika kunge yunifomu, kugona kwakadzama kugona uye hunhu hunonakidza hunoita kuti ive shamwari huru kumhuri uye kubasa, sezvo vachishanda zvakanaka chaizvo sembwa dzemapurisa kana imbwa dzinotsigira vanhu vakaremara.
1 Hunhu hwemutema wechiGerman mutema
2 Unhu hwako chii?
2.1 Nhema yeGerman Mufudzi hunhu
3 Kuchengeta mutema wechiGerman mufudzi
3.2 Basa rekunze
4 Hupenyu hwemufudzi mutema wechiGerman huripi?
Hunhu hwemutema wechiGerman mutema
Mufudzi mutema wechiGerman imhuka inoyevedza, ine chitarisiko chakapfava uye hunhu hunoshamisa. Hongu zvirokwazvo, imbwa isingagone kurarama hupenyu hwekugara, nekuti zvikasadaro hazvingashamise kuti ave nemaitiro ausingade; semuenzaniso, imbwa nhema gwai diki inogona kuhukura pasina chikonzero, kana kupwanya zvinhu kungoedza kupisa simba.
Kumuziva zvirinani, isu tichaenda kukuudza iwe kuti chii chimiro chimiro:
Kazhinji, mutema wechiGerman mutema anozivikanwa kuratidza iwo chaiwo maitiro erudzi. Iwo akakurisa zvishoma pane zvakajairika vafudzi veGerman uye mvere dzadzo dzinogona kuve dzakareba uye pfupi.
Panogona kuve nemukana wekuti kana Mufudzi wechiGerman asiri mutema zvachose anogona kunge aine geni uye vane vatema veGerman veGerman Mufudzi, zvisinei izvi hazviitike nehama dzavo, White German Mufudzi kana weSwitzerland Mufudzi
Unhu hwako chii?
Kunge hama dzayo dzepedyo, imbwa nhema gwai imhuka isingawanzo kuita hasha. Dzimwe nguva unogona kupa mamiriro ekufungidzira nevanhu vausingazive, zvakadaro uye kana uchinge wajaira zvine hushamwari. Parizvino ivo vaine mhuri imhuka dzakadzikama uye dziri nyore kubata nadzo.
Kunyangwe hazvo vatema veGerman vafudzi imbwa dzakanaka kwazvoIvo vanodawo kutarisirwa kwakawanda uye panguva imwechete kuzvipira kune avo varidzi uye zvakare nenhengo dzese dzemhuri. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei imbwa nhema dzemakwai dzakakwikwidza zvikuru kushanda sembwa dzinotsigira vanhu vakaremara.
Nhema yeGerman Mufudzi hunhu
Nekuda kwechitarisiko chakasimba chine imbwa nhema yehwai, vanhu vazhinji vanogona kutya nyore, tikachiisa pamuedzo tinozoona kuti pese patinoenda kunofamba nembwa yedu, vanhu vanowanzo kuyambuka mugwagwa kuti vagare kure kure sezvinobvira, asi sevaridzi vembwa zvinodikanwa kuti isu tizive hunhu hune chipfuwo chedu.
Nekudaro, chokwadi chaicho chakasiyana, vatema veGerman vafudzi imhuka izvo vane hushamwari hunhu uye panguva imwechete yakatsiga. Imbwa dema dzemakwai imhuka dzakatendeka kwazvo dzinogara dzakangwarira kune chero chinhu chingaitika uye kuratidza kuvimba kwadzo kwese kutarisa nekuchengetedza mhuri dzadzo.
Kuchengeta mutema wechiGerman mufudzi
Chii chiripo chekudyisa mutema wechiGerman mufudzi? Chero bedzi iri imbwanana, iwe unofanirwa kuipa chaiyo chidyiro chembwa diki, nekuti yavo mapuroteni zvido zvichave zvakakwirira zvakanyanya kupfuura kamwe pavanosvika pakukura. Asi mushure megore kana zvakadaro, iwe unofanirwa kutsvaga chikafu chembwa vakuru.
Ehe, Tinokurudzira kusarudza mhando dzinoita zvigadzirwa zvavo zvisina zviyo. Nenzira iyi iwe uchave nechokwadi chekuti inokura padanho rakanaka, uye iine hutano.
Mufudzi wechiGerman imbwa inogara iri zvine chekuita nebasa remaoko uye iri chikonzero ichi kuti rudzi urwu runoda kurovedza muviri kazhinji. Imhuka inomira mushe mushe mumitambo yezvemitambo, senge schutzhund, unova mutambo wakagadzirwa kuti uchengete humwe hunyanzvi hwerudzi urwu riite, iri imwe yedzakanakisa nzira dzekukubatsira kuti ugare uine hutano.
Kufamba kwacho kwakakosha kwazvo kunyangwe vari mumunda, kumahombekombe kana kumakomo uye zvinokurudzirwa kunyanya kana vaine nzvimbo yaunokwanisa kumhanya zvakanyanya sezvaunoda. Sezvatakataura, haisi imbwa inogona kunge iri pamba zuva rose neusiku, asi inofanira kubuda kunoshandisa makumbo uye kubatana nevamwe.
Kushamwaridzana kwekutanga kwembwa nhema gwai kwakakosha kwazvo, nekuti nenzira iyi vanokasira kujairira mhando dzakasiyana dzevanhu, nzvimbo, kurira uye hwema uye panguva imwe chete. inokudzidzisa maitiro ekuzvibata mune chero mamiriroHunhu hwauchazochengetedza kwehupenyu hwako hwese. Naizvozvo, iwe unofanirwa kutanga kutanga, kana iye aine mwedzi miviri yekuzvarwa.
Zvishoma nezvishoma uye zvishoma nezvishoma, edza kumuita kuti ataurirane nedzimwe imbwa, uye kunyange nekatsi kana iwe uchifunga kutora feline. Iyo yekupedzisira inonyanya kukosha, nekuti mufudzi mutema wechiGerman akakurisa uye akasimba kupfuura kati, saka kushamwaridzana kwakakosha kuti imbwa uye feline kufambidzana kubva pakutanga.
Iyo yakanyanya kukurudzirwa zera yekupa yako yekutanga kugeza iri pamwedzi mitatu yehupenyu. Kuti uite izvi, unofanirwa shandisa chete sipo dzisina kwazvakarerekera, dzakakodzera imbwa. Iyo frequency ichave iri pamwedzi, nekuti kana iwe ukageza kazhinji kazhinji iro dura remafuta anodzivirira ganda rako rinorasika.
Zvakare, iwe unofanirwa kukwesha huswa hwavo mazuva ese kuti nenzira iyi tibvise bvudzi rakafa. Mumwaka wekuteura, unoenderana nechirimo, unogona kuona kuti vhudzi ravo rinodonha zvakanyanya kupfuura munguva yechando. Izvi zvine musoro, sezvo mhuka ichichinja jasi rinoichengetedza kubva kuchitonho kune imwe iyo ichaitendera kuti igone kukunda kupisa kwezhizha. Naizvozvo, kana iwe usiri kuda kuti ipedzisire yasara 'mafingerprints' ayo pamidziyo, uchafanirwa kuikwesha kazhinji.
Hupenyu hwemufudzi mutema wechiGerman huripi?
Izvo hazvina kushata, asi zvinodikanwa enda kuna vet kanenge kamwe pagore yeongororo yakajairwa. Zvakare, iwe unofanirwa kufunga kuti iwe une imwe fungidziro yekutambura zvimwe zvirwere, seizvi:
Dermatitis: imhando yeganda rinokanganiswa nehutachiona kana hutsanana husina kunaka.
Glaucoma: iko kuwedzera kwekumanikidza muziso semhedzisiro yekuunganidzwa kwemvura mukati. Mamwe mashoko.
Hip dysplasia: iko kuzvimba muchikamu chiri pakati pechiuno pfupa uye femur bone. Mamwe mashoko.
Gokora dysplasia: iko kuzvimba kwegokora mubatanidzwa.
Keratitis: iko kuzvimba kwekona yeziso.
Nechikonzero ichi, zvinonyanya kukosha kuti umutore uende naye kune nyanzvi kana iwe uchinge waona kuti haana hutano. Uye, pamusoro pezvo, unofanirwa kufunga kuti majekiseni ayo anosungirwa munyika yako, uye microchip, anofanira kupihwa.
Tinovimba kuti izvo zvawakaverenga nezvemufudzi mutema wechiGerman zvabatsira kwauri. Kana iwe ukafunga kutora imwe, zvinonyanya kuitika kuti nekukurumidza kwete kupfuura gare gare iwe uve shamwari dzakanaka kwazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Imbwa nyika » General Imbwa » Imbwa dzinobereka » Hunhu uye kuchengetwa kweiye mutema wechiGerman Mufudzi
lourdes carolina akadaro
ndatenda nekujeka kwetsananguro maererano nehunhu hwerudzi urwu. Iwo ave achibatsira zvikuru, uye zvinotipa magwara ekuziva maitiro ekurapa; Aka ndekekutanga kuva nemumwe, yatove nemwedzi mitanhatu yekuberekwa, ndeyemwanakomana wangu…. asi isu tese tinopinda uye tinozvichengeta
Pindura kune lourdes carolina
Kuranga imbwa sei
Iyo Hokkaido Imbwa